ဆရာဝန်၊ မော်ဒယ် နန်းမွေစံ အထွေထွေ ဆေးကုသခွင့်လိုင်စင် ပိတ်သိမ်းခံရ - TheeSayChin
June 11, 2019 Min Yar Zar	0 Comments Up To Date News
ဆရာဝန်၊ မော်ဒယ် နန်းမွေစံအား မြန်မာနိုင်ငံ ဆေးကောင်စီမှ အထွေထွေဆေးကုသခွင့် လိုင်စင်ကို ဇွန်လ ၃ ရက်နေ့က အမိန့်ကြော်ငြာစာ ထုတ်ပြန်ကာ ပိတ်ပင်လိုက်ကြောင်း သိရပါတယ်။ မော်ဒယ် နန်းမွေစံ အနေနဲ့ သူကိုင်ဆောင်ထားတဲ့ ဆေးကုသခွင့် လိုင်စင်ကို တလအတွင်း သွားရောက် အပ်နှံရမှာ ဖြစ်ပါတယ် …. ။
အမိန့် ထုတ်ပြန်ထားတဲ့ ကြော်ငြာစာ အရ ဒေါက်တာ နန်းမွေစံဟာ မြန်မာ့ရိုးရာ ယဉ်ကျေးမှုနှင့် သင့်လျော်မှု မရှိသော ဝတ်စားဆင်ယင်မှုများဖြင့် Facebook ပေါ်တွင် ဓာတ်ပုံတင်ခြင်း ကိစ္စများ ဆက်လက် ဆောင်ရွက်ခြင်း မပြုရန် ၂၀၁၉ ခုနှစ်၊ ဇန်နဝါရီလ ၁၄ ရက်နေ့က ကတိကဝတ် ပြုခဲ့တယ်လို့ သိရပါတယ်။ ကတိကဝတ် ပြုခဲ့ပြီး နောက်ပိုင်း ၃ လကျော်တိုင်အောင် နန်းမွေစံဟာ Facebook ပေါ် ပုံတင်ခြင်းများ၊ ဗီဒီယိုများ တင်ခြင်း ကိစ္စများ ပြုလုပ်လျက်ရှိတာကြောင့် မေလ ၃၁ ရက်နေ့မှာ ကျင်းပတဲ့ မြန်မာနိုင်ငံ ဆေးကောင်စီ အလုပ်မှုဆောင်အဖွဲ့ရဲ့ အစည်းအဝေး ဆုံးဖြတ်ချက်အရ အခုလိုမျိုး ဆေးကုသခွင့် လိုင်စင် ပိတ်သိမ်းကြောင်း အမိန့်ကြေညာချက် ထုတ်ပြန်ခဲ့တာပဲ ဖြစ်ပါတယ်။
မော်ဒယ် နန်းမွေစံကတော့ သူ့ရဲ့ Facebook လူမှုကွန်ရက် စာမျက်နှာမှာ “What is human right? Where is democracy”လို့ မေးခွန်းထုတ် ရေးသား တင်ထားပါတယ်။
ဓာတ်ပုံ – Nang Mwe San’s Facebook
နန်းမွေစံဆိုတဲ့ မော်ဒယ်လှလှလေးကိုတော့ ပရိသတ်တွေတော်တော်များများသိကြမှာပါ။ နန်းမွေစံဟာသူမရဲ့ လှပတဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကောက်ကြောင်းတွေနဲ့ ဆွဲဆောင်မှုရှိတဲ့ဟန်ပန်တွေကြောင့် ပုရိသတွေအသည်းစွဲဖြစ်နေရသလို ပရိသတ်အားပေးမှုကိုလည်းရရှိထားတဲ့ အနုပညာရှင်တစ်ဦးလည်းဖြစ်ပါတယ်။ ဒါ့အပြင်အနုပညာဘက်မှာထူးချွန်တဲ့ နန်းမွေစံက ပညာရေးပိုင်းမှာလည်းလစ်ဟင်းမှုမရှိပဲ ဆရာဝန်ဘွဲ့ရထားသူလည်းဖြစ်ပါတယ်။ ဒါပေမယ့်အခုမနက်မှာတော့ နန်းမွေစံရဲ့ page ကနေ စိတ်မကောင်းစရာသတင်းတစ်ခုတက်လာခဲ့ပါတယ်။
အဲဒါကတော့ နန်းမွေစံတစ်ယောက် ဆေးကုသခွင့်လိုင်စင်ပိတ်သိမ်းခံလိုက်ရပြီဆိုတဲ့သတင်းပါပဲ။ နန်းမွေစံက အထွေထွေဆေးကုသခွင့်လိုင်စင်ကို ပိတ်သိမ်းလိုက်ကြောင်း အမိန့်ကြော်ငြာစာကို သူမရဲ့ page မှာ “လူ့အခွင့်အရေးဆိုတာဘာလဲ ဒီမိုကရေစီကရောဘယ်မှာလဲ”လို့ အဓိပ္ပါယ်ရတဲ့ စာသားနဲ့အတူ တင်ထားခဲ့ပါတယ်။ ပရိသတ်တွေကတော့ အဲဒီ ပို့စ်အောက်မှာ နန်းမွေစံကိုအားပေးနေကြပြီး စိတ်မကောင်းဖြစ်နေကြတဲ့သူတွေ မကျေမချမ်းဖြစ်နေကြသူတွေလည်းရှိနေတာမြင်ရပါတယ် …. ။
အမိန့်စာထဲမှာပါဝင်တာကတော့ နန်းမွေစံဟာ မြန်မာ့ယဉ်ကျေးမှုနဲ့မသင့်လျော်တဲ့ ဝတ်စားဆင်ယင်မှုတွေနဲ့ facebook ပေါ်မှာ ဓာတ်ပုံတွေတင်ထားတဲ့ နန်းမွေစံဟာ အဲဒီလိုလုပ်ရပ်တွေမလုပ်တော့ပါဘူးလို့ တစ်လပိုင်း ဆယ့်လေးရက်ကတည်းက ကတိကဝတ်ပြုခဲ့ပြီးနောက်မှာ ဆက်လက်လုပ်ဆောင်နေတာကိုတွေ့ရတာကြောင့် ၃၁.၅.၂၀၁၉ မှာကျင်းပတဲ့ မြန်မာနိုင်ငံဆေးကောင်စီအလုပ်အမှုဆောင်အဖွဲ့အစည်းအဝေးရဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်အရ နန်းမွေစံကို ဆေးကုသခွင့်လိုင်စင်ပိတ်သိမ်းလိုက်ကြောင်းပါရှိပါတယ်။
ဆရာဝနျ၊ မျောဒယျ နနျးမှစေံအား မွနျမာနိုငျငံ ဆေးကောငျစီမှ အထှထှေဆေေးကုသခှငျ့ လိုငျစငျကို ဇှနျလ ၃ ရကျနကေ့ အမိနျ့ကွျောငွာစာ ထုတျပွနျကာ ပိတျပငျလိုကျကွောငျး သိရပါတယျ။ မျောဒယျ နနျးမှစေံ အနနေဲ့ သူကိုငျဆောငျထားတဲ့ ဆေးကုသခှငျ့ လိုငျစငျကို တလအတှငျး သှားရောကျ အပျနှံရမှာ ဖွဈပါတယျ …. ။
အမိနျ့ ထုတျပွနျထားတဲ့ ကွျောငွာစာ အရ ဒေါကျတာ နနျးမှစေံဟာ မွနျမာ့ရိုးရာ ယဉျကြေးမှုနှငျ့ သငျ့လြျောမှု မရှိသော ဝတျစားဆငျယငျမှုမြားဖွငျ့ Facebook ပျေါတှငျ ဓာတျပုံတငျခွငျး ကိစ်စမြား ဆကျလကျ ဆောငျရှကျခွငျး မပွုရနျ ၂၀၁၉ ခုနှဈ၊ ဇနျနဝါရီလ ၁၄ ရကျနကေ့ ကတိကဝတျ ပွုခဲ့တယျလို့ သိရပါတယျ။ ကတိကဝတျ ပွုခဲ့ပွီး နောကျပိုငျး ၃ လကြျောတိုငျအောငျ နနျးမှစေံဟာ Facebook ပျေါ ပုံတငျခွငျးမြား၊ ဗီဒီယိုမြား တငျခွငျး ကိစ်စမြား ပွုလုပျလကျြရှိတာကွောငျ့ မလေ ၃၁ ရကျနမှေ့ာ ကငျြးပတဲ့ မွနျမာနိုငျငံ ဆေးကောငျစီ အလုပျမှုဆောငျအဖှဲ့ရဲ့ အစညျးအဝေး ဆုံးဖွတျခကျြအရ အခုလိုမြိုး ဆေးကုသခှငျ့ လိုငျစငျ ပိတျသိမျးကွောငျး အမိနျ့ကွညောခကျြ ထုတျပွနျခဲ့တာပဲ ဖွဈပါတယျ။
မျောဒယျ နနျးမှစေံကတော့ သူ့ရဲ့ Facebook လူမှုကှနျရကျ စာမကျြနှာမှာ “What is human right? Where is democracy”လို့ မေးခှနျးထုတျ ရေးသား တငျထားပါတယျ။
ဓာတျပုံ – Nang Mwe San’s Facebook
နနျးမှစေံဆိုတဲ့ မျောဒယျလှလှလေးကိုတော့ ပရိသတျတှတေျောတျောမြားမြားသိကွမှာပါ။ နနျးမှစေံဟာသူမရဲ့ လှပတဲ့ခန်ဓာကိုယျကောကျကွောငျးတှနေဲ့ ဆှဲဆောငျမှုရှိတဲ့ဟနျပနျတှကွေောငျ့ ပုရိသတှအေသညျးစှဲဖွဈနရေသလို ပရိသတျအားပေးမှုကိုလညျးရရှိထားတဲ့ အနုပညာရှငျတဈဦးလညျးဖွဈပါတယျ။ ဒါ့အပွငျအနုပညာဘကျမှာထူးခြှနျတဲ့ နနျးမှစေံက ပညာရေးပိုငျးမှာလညျးလဈဟငျးမှုမရှိပဲ ဆရာဝနျဘှဲ့ရထားသူလညျးဖွဈပါတယျ။ ဒါပမေယျ့အခုမနကျမှာတော့ နနျးမှစေံရဲ့ page ကနေ စိတျမကောငျးစရာသတငျးတဈခုတကျလာခဲ့ပါတယျ။
အဲဒါကတော့ နနျးမှစေံတဈယောကျ ဆေးကုသခှငျ့လိုငျစငျပိတျသိမျးခံလိုကျရပွီဆိုတဲ့သတငျးပါပဲ။ နနျးမှစေံက အထှထှေဆေေးကုသခှငျ့လျိုငျစငျကို ပိတျသိမျးလိုကျကွောငျး အမိနျ့ကွျောငွာစာကို သူမရဲ့ page မှာ “လူ့အခှငျ့အရေးဆိုတာဘာလဲ ဒီမိုကရစေီကရောဘယျမှာလဲ”လို့ အဓိပ်ပါယျရတဲ့ စာသားနဲ့အတူ တငျထားခဲ့ပါတယျ။ ပရိသတျတှကေတော့ အဲဒီ ပို့ဈအောကျမှာ နနျးမှစေံကိုအားပေးနကွေပွီး စိတျမကောငျးဖွဈနကွေတဲ့သူတှေ မကမြေခမျြးဖွဈနကွေသူတှလေညျးရှိနတောမွငျရပါတယျ
အမိနျ့စာထဲမှာပါဝငျတာကတော့ နနျးမှစေံဟာ မွနျမာ့ယဉျကြေးမှုနဲ့မသငျ့လြျောတဲ့ ဝတျစားဆငျယငျမှုတှနေဲ့ facebook ပျေါမှာ ဓာတျပုံတှတေငျထားတဲ့ နနျးမှစေံဟာ အဲဒီလိုလုပျရပျတှမေလုပျတော့ပါဘူးလို့ တဈလပိုငျး ဆယျ့လေးရကျကတညျးက ကတိကဝတျပွုခဲ့ပွီးနောကျမှာ ဆကျလကျလုပျဆောငျနတောကိုတှရေ့တာကွောငျ့ ၃၁.၅.၂၀၁၉ မှာကငျြးပတဲ့ မွနျမာနိုငျငံဆေးကောငျစီအလုပျအမှုဆောငျအဖှဲ့အစညျးအဝေးရဲ့ဆုံးဖွတျခကျြအရ နနျးမှစေံကို ဆေးကုသခှငျ့လိုငျစငျပိတျသိမျးလိုကျကွောငျးပါရှိပါတယျ။
← ပြိုင်ဘက်များကိုတုန်လှုပ်စေသော ဖိုးသော်၏ ထိပ်တန်းစွမ်းရည် (၃) မျိုး
တက်တူးထိုးတာနဲ့ပတ်သက်ပြီးကြိုက်သလို ဝေဖန်ခွင့်ရှိတယ်လို့ပြောလိုက်တဲ့ ခင်လှိုင် →
June 4, 2019 Min Yar Zar 0
ယနေ့ထွက် (၄) ကြီမ်မြောက် အောင်ဘာလေ ထီပေါက်စဉ် တိုက်ရန်။
June 1, 2019 Min Yar Zar 0
ကလေးသရုပ်ဆောင် ဘဝကတည်းက ပရိသတ်တွေကို ခံစားချက်ရသတွေ မျိုးစုံပေးနိုင်ခဲ့တဲ့ ချစ်စရာကောင်မလေး ယွန်းယွန်းကတော့ လက်ရှိမှာ အရောင်အသွေးစုံလင်တဲ့ အပျိုမလေး ဖြစ်လို့နေပါပြီ။ အရွယ်​​ရောက်​လာ​လေ ပိုပိုလှလာ​လေ ဖြစ်​တဲ့ ယွန်းယွန်း​လေးက​တော့ အခုဆိုရင်​ မင်းသမီးတစ်​ဦးအ​နေနဲ့ သရုပ်​​ဆောင်​​နေရပြီပဲ ဖြစ်​ပါတယ်​။ လတ်တလောမှာတော့